Abashayeli bamatekisi eKZN banikezwe isexwayiso ngokuziphatha kwabo | News24
Abashayeli bamatekisi eKZN banikezwe isexwayiso ngokuziphatha kwabo
Durban – Usihlalo esifundazweni sakwaZulu-Natal uthe bazimisele ukubhekana nabashayeli bamatekisi ababeka impilo yabagibeli engcupheni, kubika iNewswatch.
Ngokusho kwale nhlangano, labo abatholakala benecala lokushayela ngobudedengu bazobhekana nokuqondiswa kwezigwegwe, ukuhlawuliswa noma ukumiswa emsebenzini wabo wokushayela isikhathi esiminganiselwa ezinyangeni eziyisithupha.
OLUNYE UDABA:‘Zincane izingozi ezibandakanya amatekisi kunezimoto ezincane’
UBoy Zondi uthi bathumele ithimba labantu abalinganiselwa ku-80 ukuba bazungeze isifundazwe sonke behlola ukusebenza kwezimoto emgwaqeni, emarenke futhi babike nangokuziphatha kwabashayeli.
“Njengoba nabanikazi bamaatekisi sihlale sibatshela ukuthi baqinisekise ukuthi amatekisi esigculisayo uma bewanikeza abashayeli. Sonke sizama ngokusemandleni ethu ukwehlisa isibalo samatekisi angafanele ukuba semgwaqeni,”kusho yena.